युरोप वरिपरि यात्रा को लागि रेल सुझाव यात्री लागि आवश्यक हो. पहिले, त्यहाँ युरोप यात्रा लागि विभिन्न कारणहरू छन्. तपाईं सुन्दर पुल हेर्न सक्नुहुन्छ, रेलवे स्टेशन, and equally मनोरम दृश्यहरु. अथवा तपाईं को अचम्मको संस्कृति हेर्न यात्रा गर्दै इटाली. अर्कोतर्फ, तपाईं हुन सक्छ व्यवसायको लागि यात्रा. वा माथिका सबै र दुबै व्यवसाय र रमाईलो यात्रा गर्दै – जबकि परिभ्रमण कारणहरू को आवश्यकता सधैं भिन्न छन् सुझाव र भाडे यात्रा को लागि नै रहने.
सर्वश्रेष्ठ ट्रेन सुझाव & Hacks for traveling Europe by train
अगाडि बुकिंग लागि रेल सुझाव मात्र टिकट अगाडि समय मदत बुकिंग छैन भन्ने छ तपाईं बजेट यसलाई पनि आफ्नो सम्पूर्ण यात्रा लागि सिट आरक्षित गरेको छ ग्यारेन्टी गर्न मद्दत गर्न सक्छ. प्रारम्भिक बुकिंग टिकट प्रकाश मा अधिकतम लाभ हुनुको, हामी चाँडै तिनीहरूले उपलब्ध रूपमा टिकट बुक गर्न लग इन सिफारिस गर्छौँ (2-3 महिना पूर्व यात्रा गर्न). यसबाहेक, अफ-सीजनको भ्रमणको योजनाले तपाईंको भीडबाट बच्न र अझ राम्रा मूल्यहरू पनि प्राप्त गर्दछ. छैन उल्लेख, प्रारम्भिक बुकिंग तपाईं ठूलो भीड र ठूलो लाइनहरू जोगिन मदत गर्न सक्छ कि. यसबाहेक, तपाईं जान बुक यदि पर्यटक हटस्पट जुलाई / अगस्ट जस्तै उच्च सिजन समयमा, you are less likely to encounter local people and more likely to be surrounded by tourists. So although you may still be able to see all the sights at these times you will miss out on the authentic experiences. घटना मा कि तपाइँ एक जोडी को रूप मा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा एक समूह मा तपाईं छुट मूल्यको हकदार हुन सक्छ तपाईंको यात्रा को लागी. तर तपाईं यात्रा को सम्पूर्ण अवधि लागि एक जोडी / समूहको रूपमा सँगै रहन भने सम्झना यी छूट मात्र मान्य हुनेछ.
यात्रा कागजात लागि पहिलो रेल सुझाव छ: युरोप देशहरूमा कि पर्यटकहरु यात्रा कागजात देखाउन बिना सीमाना मार्फत जान अनुमति दिन्छ तिनीहरूलाई बीच एक सम्झौता गर्छन. युरोपेली संघ देशहरूमा, खासमा, यात्रु पासपोर्ट देखाउन बिना छोडेर प्रविष्ट गर्न अनुमति. तथापि, यो खुला सीमाना नीति भाग सबै युरोपेली संघ देशहरूमा like Croatia, बुल्गारिया, र रोमानिया. तुलनामा, there are countries that are not part of the European Union that do participate in the agreement like Switzerland and Norway.
एक ट्रेन सेव तपाईं सकेसम्म धेरै पैसा बचत गर्न चाहन्छ. So our search engine finds you the cheapest tickets. Browse to our Save A Train site now and take3मिनेट आफ्नो अर्को रेल टिकट पाउन. क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, र 10 अन्य विकल्प.